MANANGANA FAHAZOAN-DALANA ROA MIARAKA AMIN'I GOOGLE - GOOGLE - 2019
Ahoana no fomba hananganana fahazoan-dàlana roa amin'ny Google?
Ny fifandraisana an-telefaona dia ampiasaina amin'ny fifanakalozana vaovao eo amin'ny ordinatera. Azo atao ny rakitra sy ny angona ho an'ny fanovana sy ny fitantanana ny rafitra. Matetika dia misy fahadisoana isan-karazany rehefa miasa amin'ireny fifandraisana ireny. Androany dia mamakafaka iray amin'izy ireo isika - ny tsy fahafahana mifandray amin'ny solosaina lavitra.
Tsy afaka mifandray amin'ny PC lavitra
Ny olana izay horesahina dia mipoitra rehefa miezaka ny miditra amin'ny PC na ny mpampiasa hafa amin'ny fampiasana ny mpanjifa Windows RDP. Fantatsika izany amin'ny anarana hoe "Remote Desktop Connection".
Ity hadisoana ity dia miseho noho ny antony maro. Ankoatra izay dia hiresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny antsipiriany isika ary hanome fomba hamahana azy.
Jereo koa: Mampifandray amin'ny ordinatera lavitra
Antony 1: Ajanòny ny fifehezana remote
Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpampiasa na ny mpitantana ny rafitra dia manidy ny safidy mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny rafitra. Natao izany mba hanatsarana ny fiarovana. Mandritra izany fotoana izany, ny fiovana sasany dia miova, ny serivisy sy ny singa dia tsy kilemaina. Ity ambany ity ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra mamaritra io fomba fanao io. Mba hahafahana manome alalana farafaharatsiny, dia tsy maintsy ampidirinao daholo ireo safidy izay nakatontsika.
Vakio bebe kokoa: Esory ny fitantanana ordinatera lavitra
Politique vondrona eo an-toerana
Amin'ny ordinatera roa, dia mila manamarina ihany koa ianao na tsia ny komponentan'ny RDP eo amin'ny sehatry ny politika eo an-toerana. Ity fitaovana ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny edisiona matihanina, ambaratonga ambony sy orinasa miompana amin'ny Windows, ary koa amin'ny versione server.
Mba hahazoana ilay antsoina hoe string "Run" fanalahidy Windows + R ary manendre ekipa iray
Ao amin'ny fizarana "Configuration eo amin'ny ordinatera" Manokatra sampana misy teti-bola ary avy eo "Windows Components".
Aorian'izay dia sokafy ny lahatahiry Remote Desktop Services, Session Host ary tsindrio ny subfolder miaraka amin'ny fikirakirana fifandraisana.
Ao amin'ny faritra havanana amin'ny varavarankely, tsindrio ilay doka izay mamela ny fifandraisana amin'ny Remote Desktop Services.
Raha manan-danja ilay paramètre "Tsy asiana" na "Enable"dia tsy manao na inona na inona isika, raha tsy izany, mametraka ny famolavolana amin'ny toerana tiana sy ny fanontana "Ampiharo".
Atsaharo indray ilay milina ary miezaha hahazo fidirana mivantana.
Antony 2: Tsy ampy ny tenimiafina
Raha toa ny solosaina taranja, na ny kaonty, ny kaontin'ny mpampiasa, izay miditra ao amin'ny rafitra lavitra, dia tsy voafetra amin'ny fiarovana ny tenimiafina, dia tsy hahomby ny fifandraisana. Mba hanitsiana ny toe-draharaha dia tsy maintsy mamorona tenimiafina ianao.
Vakio bebe kokoa: Mametraka ny tenimiafina eo amin'ny solosaina izahay
Antony 3: Fialam-boly
Ny fomba amam-panafana nalefa teo amin'ny PC lavitra dia mety hanelingelina ny fifandraisana ara-dalàna. Ny vahaolana eto dia tsotra: tsy maintsy esorina ity fomba ity.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hanaisotra ny fomba amam-panafana amin'ny Windows 10, Windows 8, Windows 7
Antony 4: Antivirus
Antony iray hafa mahatonga ny tsy fahafahana mampifandray azy dia ny rindrambaiko antivirus ary ny firewall misy azy (firewall). Raha toa ka apetraka ao amin'ny solosaina finday ny rindrambaiko toy izany, dia tsy maintsy miala tsy ara-potoana izy.
Antony 5: Fiarovana Security
Io famandrihana nomerika KB2992611 io dia natao hamafana ny iray amin'ireo vulnerabilities amin'ny Windows mifandraika amin'ny sora-bolana. Misy safidy roa amin'ny fanitsiana ny toe-draharaha:
Fanavaozana ny rafitra manontolo.
Esory ity vaovao ity.
Ahoana ny fampivoarana Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP
Ahoana ny fanesorana ny fanavaozana ao amin'ny Windows 10, Windows 7
Antony 6: Software Encryption Drives
Ny programa sasany, toy ny CryptoPro, ohatra, dia mety hahatonga ny fahadisoana amin'ny fifandraisana diso. Raha mampiasa io rindrambaiko io ianao, dia tokony esorina amin'ny solosaina izy io. Noho izany dia tsara kokoa ny mampiasa Revo Uninstaller, satria ankoatra ny fanesorana tsotra dia mbola mila manadio ny rafitry ny rakitra sisa sy ny rafitra fisoratana anarana isika.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hanaisotra programa tsy misy solosaina ao amin'ny solosainao
Raha tsy azonao atao raha tsy mampiasa rindrambaiko kriptografika ianao, dia aorio aorian'ny fametrahana ny famoahana farany. Matetika ity fomba ity dia manampy amin'ny famahana ilay olana.
Vahaolana hafa: Programa ho an'ny fifandraisana lavitra
Raha toa ka tsy namaha ilay olana ny torolàlana etsy ambony, dia tandremo ireo programa hafa ho an'ny solosaina an-tariby, ohatra ny TeamViewer. Ny dikan-teny maimaim-poana dia manana fahaiza-manao ampy hanatanterahana ny asa.
Vakio bebe kokoa: Fandaharanasam-pandaharana momba ny fitantanana remote
Maro ny antony mahatonga ny tsy fahafahana mampifandray amin'ny alàlan'ny Desktop iray amin'ny alàlan'ny mpanjifa RDP. Nanome fomba hanesorana ny ankamaroan'izy ireo izahay, ary matetika, ampy izany. Raha misy fahadisoana miverimberina, arovy ny fotoana sy ny aretin-tsainao amin'ny fampiasana mpanjifa iray hafa, raha azo atao izany.